I-CRM Yezenhlalakahle: Ukuphathwa Kobudlelwano Namakhasimende
I-eBook yamahhala: Ukuthuthela kwi-Social CRM
ULwesibili, May 31, 2011 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ukuphathwa Kobudlelwano Namakhasimende kuyisihluthulelo ezinhlanganweni eziningi, kuzinikeza ubuhlakani bamakhasimende nedatha abayidingayo ukugcina ubuhlobo obuhle namakhasimende abo. Ukubeka imithombo yezokuxhumana ngaphezulu kwemisebenzi yobudlelwano bakho namakhasimende kungasheshisa ukusebenza kwenkampani yakho futhi yakhe ubudlelwane obuqine kakhulu - okuholela emathubeni amaningi wokuxhumana namakhasimende ngaphandle kwezinqubo ezisemthethweni nokwakha umphakathi.
I-Emailvision isanda kukhipha i-Social CRM for Dummies, i-ebook yamahhala ezosiza izinkampani ukuthi ziqonde umehluko phakathi I-CRM Yezenhlalo neCRM kanye nokuthi ungayisebenzisa kanjani inhlalakahle emizamweni yabo ye-CRM.
Kusuka kule ncwadi: Imithombo yezokuxhumana kanye nokuxhumana nabantu kuguqule umnotho womhlaba waba yinto efana nemakethe yedolobha elincane, lapho ukubhuza komphakathi, hhayi ukumaketha, kunquma ukuthi amabhizinisi achuma noma ayahluleka. I-CRM Yezenhlalakahle iyimpendulo yamasu kule ndawo entsha yebhizinisi. Nge-CRM Yezenhlalo:
Kugxilwe ekwakhiweni komphakathi nokwakha ubudlelwano.
Ngezinkundla zokuxhumana, kufaka phakathi i-Facebook ne-Twitter, amakhasimende angabanikazi futhi alawula ingxoxo.
Ukuxhumana kuyibhizinisi-kuya-kumthengi kepha futhi futhi kuyikhasimende-kuya-kumakhasimende kanye nekhasimende elizoba khona.
Ikhasimende lisebenzisana namabhizinisi ngqo noma ngokungaqondile ukwenza ngcono imikhiqizo, izinsizakalo, kanye nolwazi lwekhasimende.
Ingxoxo ayihlelekile ngokwedlulele futhi “ingeyangempela” ngokwengeziwe, isuka ku-brand speak iya emphakathini we-speak.
I-eBook inikeza lonke ulwazi oludingekayo - ekwakheni isu, ukukhetha ubuchwepheshe obufanele, indlela yokusebenzisa ubuchwepheshe, ukuqeqesha abasebenzi bakho, imiphumela yokulinganisa - yonke indlela yokugwema izingibe ezivamile.
Ukudalulwa okugcwele: Ngithole inguqulo ekhishwe ngaphambilini ye-eBook futhi ngabhala isincomo sayo. Ukubukwa nge-imeyili ubelokhu eyiklayenti le- DK New Media .
SmartDocs: Phatha iMicrosoft Word Repository
Iphrojekthi yeDomino: Zethembe Inselelo Yokubhala
Aug 10, 2011 ngo-7: 58 PM
i-athikili enhle! I-CRM yezenhlalo nakanjani ikhuphukile. Uke wezwa ngeGreenRope? Ikuvumela ukuphatha i-CRM yakho nakho konke okunye kudeshibhodi eyodwa.